Kugiya ongoti Archives | Umbele
Category: Kugiya ongoti
ONKE amabhizinisi akhona namhlanje aqala njengomcabango. Namhlanje ngithanda sikesibuke ukuthi yimiphi imigudu elandela emva kokuthi usufikelwe wumcabango wokuqala ibhizinisi.
Sisho ukuthini isinqumo seNkantolo yokuDlulisa amaCala ngokukhishwa kwamathenda?, kuloba uNtokozo Biyela
ININGIZIMU Afrika isuka kude nokulwa nokubandlululwa kwabantu abamnyama kwezomnotho. Uma futhi ubheka kusekude phambili uma izinto zenzeka ngalolu hlobo. Ngesonto eledlule iNkantolo yokuDluliswa kwaMacala ikhiphe isinqumo sokuthi umthetho ovuna osomabhizinisi abamnyama, iPreferential Procurement Policy Framework Act uma kucutshungulwa umsebenzi wamathenda akhishwa wuhulumeni awuhambisani noMthethosisekelo wezwe, ngakho kufanele ubuyekezwe.
Asamukele ukuthi sibi isimo somnotho eNingizimu Afrika futhi sazi ukuthi imali ayimili ezihlahleni, kuloba uSolwazi uBonke Dumisa
NGOLWESITHATHU olwedlule iPhalamende lezwe lakithi iNingizimu Afrika lihlangane kwethulwa isabelomali seminyaka emithathu ezayo, lokho okubizwa ngeMedium Term Budget Policy Statement.
EMAVIKINI amabili adlule ngike ngaqeqesha izisebenzi zezinye izinkampani esisebenzisana nazo emkhakheni wezokuqeqesha nokulola amakhono kwezisebenzi emikhakheni eyehlukene.
ABANTU abaningi abafika kimina bezocela ukucetshiswa ngezamabhizinisi baye bafike bengazi ukuthi hloboluni lwebhizinisi okufanele baluqale. Nami ngiye ngingazi ukuthi ngizothi kumuntu akaqale hloboluni lwebhizinisi uma kwayena engazazi ukuthi yini athanda ukuyenza.
UMnu u-Owen Nkomo oyisikhulu esiphezulu se-Inkunzi Wealth Group uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngezinto eziningi ezithinta umnotho wakuleli, amandla emali, izibalo zabangasebenzi nokunye. Lalela ingxoxo yabo.
Uma singaqonda isimo sosomatekisi, singabona ukuthi kungani u-R1 billion uwutiki emehlweni abo, kuloba uYamkela F Spengane
SISANDA kubona omunye ukhukhulelangoqo wesiteleka semboni yamatekisi, bekhala ngobuncane buka-R1 billion ovela kuhulumeni ukubasiza ebunzimeni ababhekene nabo ngenxa yobhubhane iCOVID-19. Njengejwayelo, iningi labantu libe nemibono ezinkundleni zokuxhumana, eminingi yayo ebonisa ukungazi.